Guulaha Uu Gaadhay XDSHSI Intuu Iska Sifeeyay Xubnihii Dib U Socodka Ahaa. - Cakaara News
Guulaha Uu Gaadhay XDSHSI Intuu Iska Sifeeyay Xubnihii Dib U Socodka Ahaa.
Jigjiga(CN) Axad.April.05.2015, Xisbiga Dimuqraadiga Soomalida Itoobiya ee hogaanka talada u haya shacabka DDSI ayaa soo maray qiimayno badan oo taariikh gal ah iyo sooyaal uu xisbigu khibrado badan kagaadhay.
Hadaba sida ay tilmaamayaan dadka ku xeel dheer sooyaalka DDSI gaar ahaan waxqabadka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ayaa tilmaamaya in shirwaynihii 8aad ee kadhacay magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Nogob bishii October ee sanadkii 2014 uu ahaa shirwayne uu xisbigu guul wayn ku hantiyay.
Waxayna dadku kutilmaamaan in xisbigu shirwaynahaas kadib karaar qaatay oo uu gaadhay go'aamo iyo isbadal u soo hoyiyay guulo dhaxal gal ah. Sidoo kale waxaa lagu tilmaamaa wakhtigaasi inuu xisbigu iska sifeeyay xubnihii dhaansanaa fikirada dib u socod nimada taasoo u suurtagalisay in lagaadho guulo dhinacyo badan ah iyo go'aamo wax ku'ool ah.
Hadaba wakhtigaasi sifaynta kadib waxaa uu xisbigu kutalaabsaday go'aamo taariikhi ah oo karaar galiyay taageerada xisbiga dal iyo dibad waxaana kamid ah guulha uu xisbigu gaadhay:
1-in si dar dar leh loo dabar jaray hadhaagii hogaamin isku sheegta Ubo.
2-in uu xisbigu gaadhay go'aamo dhaxal gal ah kuwaas oo ay kamidyihiin go'aankii ahmiyada lagu siiyay doorka ay haweenku kuleeyihiin hawlaha horumarka tusaale ahaan saamigii baarlamanka oo heer fedraal boqolkiiba 58 , heer deegaana boqolkiiba 4o.
3-mashaariicdii deegaanka oo dhaqaaqday iyo guud ahaanba shacabka iyo hogaaminta DDSI oo khibrad badan ka dhaxlay arimaha dib u socodnimda iyo damaaciga danaysinimada ah.
XDSHSI ayaa wakhtigaasi karaar laxaad leh oo taageero dhan walba ka helay. Waxaana dawlada dhexe iyo xisbiga talada dalka haya ee EPRDF ay go'aamadaasi amaan iyo bogaadin uu kahaelay XDSHSI. Iyadoo wakhti xaadirkan tusaale iyo kudayashaba loo soo qaato go'aamada uu xisbigu ku talaabsaday.